China 4 TON 4 × 4 Ina inotendeuka Forklift Mugadziri uye Mutengesi | Wilk
WIK4 vhiri rekutyaira forklift rori ine yakazara-nguva ina-mavhiri ekutyaira, ayo anowedzera zvakanyanya simba re forklift. Iyo mota yeinjiniya inogona kuita zvakachengeteka uye nemazvo kuita zvinhu kurodha pasi, kuburitsa, kurongedza uye kubata mashandiro pane isina kuenzana ivhu semadhaka, minda, uye makomo. Iyo ine yakanaka panzira yekuita, kupfuura kuita uye maneuverability. Iyo inogona kutsiva akasiyana siyana ekubatanidza kunatsiridza kugona kwebasa. Zvishandiso zvekutakura nekuburitsa zvinhu kunzvimbo dzekuparadzira zvinhu zvine mamiriro asina kunaka emigwagwa senge nhandare, matoki, uye zviteshi.
WIK 4 vhiri rekutyaira forklift marori zvakanakira:
1.Kutaridzika kwakanaka, kuumbika chimiro, diki kutendeuka radius, mwenje uye inoshanduka mashandiro, inogona kushanda mune diki nzvimbo, izere hydraulic simba mudhiraivho, mudhiraivho uye chigaro chinogadziridzwa kona uye kumberi uye kumashure nzvimbo yehukama, kuwedzera izvo zvaunoda zvemutyairi .
2. Izvo zvigadziriro zvezvakasiyana-siyana zvekunakidzwa zvakagadziridzwa zvinoenderana nezvinodiwa zve ergonomics kudzikisira kusimba kwevashandi uye kugadzirisa kugona kwekugadzira.
3. Wide view mast, mutyairi ane chiono chakakura, saka forklift iyi inokodzera kwazvo kurodha nekuburitsa, kurongedza uye kutakura-kure-kure kutakura mumunda nekunze.
(1) Iyo ine yakanaka yekupasisa uye isiri-munzira mese-mavhiri ekutyaira. Iko hakuna mutsauko pakati pemakisi uye makuru-dhayamita yakafara-base off-road matai anoshandiswa. Kubviswa kwepasi kwepasi kwemotokari kunopfuura mazana matatu emamiriyoni uye kona yekuenda inopfuura 30 °.
(2) Shandisa yakatarwa furemu. Iko kusvetuka kona yeiyo furemu inowanzo ± 30 ° ~ 40 °. Iyo yekufambisa sisitimu yakapusa uye haidi inodhura madhiraivhi emadhiraivha. Inogona kuwana diki yekushandura nharaunda, kushandisa vhiri rekufambisa kuti iswededze furemu yakatwasuka, uye kugadzira maforogo nyore kuenderana Kune zvigadzirwa, zvidiki-tonnage kuyambuka-nyika forklifts, yakakosha furemu inogona kushandiswa, iine imwechete-axle drive uye musiyano wekuvhara pane yekutyaira ekisero.
(3) Yese-mavhiri mabhureki. Kunze kwezvidiki-tonnage forklifts ayo anoshandisa kuwedzera shangu mabhureki, mazhinji acho macaliper disc mabhureki, uye mamwe anorema-tonnage maforogo anoshandisawo mabhureki akanyorova. Iyo yekupaka akamedura ndiyo yakajairika yakazvimiririra yakazvimiririra ruoko.
(4) Ye 2t ~ 3t yakataurwa yekuyambuka nyika forklifts, kumberi nekumashure maashure zvakajairika.
(5) Iyo yekumberi axle yemuchinjikwa-nyika forklift yakagadziriswa kune iyo furemu, uye iyo yekumberi ekisero inogona kusvetuka yakatwasuka ± 8 ° ~ 12 ° inoenderana nefuremu. Iyo inotsigira hydraulic cylinder yakaiswa pakati pefuremu neiyo pamberi ekisero. Kana forklift iri kusimudza, mamira ekusimudza anochengetwa munzvimbo yakatenderera nekushandisa iyo hydraulic cylinder; kana forklift iri kutyaira, emakamuri ekumusoro uye ezasi eiyo hydraulic cylinder anotenderwa kupfuura neIyo damping maburi akabatana, izvo zvinobatsira kugadzirisa kukwira kunyaradzwa kwemotokari.
(6) Kune iro rakakura vhiri uye vhiri revhiri. Wedzera hutungamiriri uye kudzikama kwenguva refu kweforiklift.
(7) Kufamba kwakanaka. Iyo yekumhanyisa mota kumhanya kazhinji (30-40) km / h. Simba chinhu chiri pamusoro pe0,65, kumhanyisa kumhanyisa kwakanaka, uye ine kugona kwekukwira kwe25 ° ~ 30 °.
(8) Yakakura mast angle. Izvi zvinodikanwa kuitira kushanda kwakachengeteka uye kutyaira pane isina kuenzana ivhu, kazhinji 10 ° ~ 15 ° kumberi uye 15 ° kumashure.
(9) Kugara kwechigaro chemutyairi. Kuitira kuona kuti opareta ane maonero ari nani panguva yekurodha mashandiro, chigaro chemutyairi chinowanzoiswa kumberi Zvekufananidza forklifts, uzviise pafuremu repamberi zvakanyanya sezvinobvira.
WIK 4 vhiri kutyaira forklift rori inoenderana parameter:
Rated mutoro (kg)
Kubuda kureba (mm)
Hutyairi hwemotokari (kg)
Kunonyanyisa kukwira ane mhosva (°)
Mast kumberi clearance (mm)
Pakati peiyo wheelbase iri panzvimbo yekubvisa pasi (mm)
Minimum wekutendeuka nharaunda (mm)
Injini simba (kw)
Shandisa yakatarwa furemu. Iko kusvetuka kona yeiyo furemu inowanzo ± 30 ° ~ 40 °. Iyo yekufambisa sisitimu yakapusa uye haidi inodhura madhiraivhi emadhiraivha. Inogona kuwana diki yekushandura nharaunda, kushandisa vhiri rekufambisa kuti iswededze furemu yakatwasuka, uye kugadzira maforogo nyore kuenderana Kune zvigadzirwa, zvidiki-tonnage kuyambuka-nyika forklifts, yakakosha furemu inogona kushandiswa, iine imwechete-axle drive uye musiyano wekuvhara pane yekutyaira ekisero.
Iyo yekumberi ekisero yemuchinjiko-wenyika mota yakatarwa kune iyo furemu, uye iyo yekumberi ekisero inogona kusvetuka yakatwasuka ± 8 ° ~ 12 ° maererano neiyo furemu. Inotsigira hydraulic cylinder yakaiswa pakati peiyo furemu uye pamberi ekisero. Kana forklift iri kusimudza, mamira ekusimudza anochengetwa munzvimbo yakatenderera nekushandisa iyo hydraulic cylinder; mota painomhanya, emakamuri ekumusoro neepasi eiyo hydraulic cylinder anogadzirwa Kubatana kuburikidza negomba rekunyorova kunobatsira kugadzirisa kukwirisa kwekufamba kwemota.
Iyo 4 vhiri yekutyaira forklift rori ine ine simba chassis inoshandiswa kurodha nekuburitsa michina munzvimbo dzekugovera zvinhu nemamiriro akashata emumigwagwa senge nhandare, madoko, uye zviteshi. Iyo ine maneuverability akanaka uye ekunze-munzira mashandiro eakajairika asiri-munzira mota uye iko kugona kwemaindasitiri kwevakajairika forklifts. Inogona kutaurwa kuve musanganiswa une simba. Iko kumhanya kweiyo off-road forklift iri pamusoro kupfuura iyo yakajairika forklift, iyo inoratidza kuti kufamba kwayo kwakasarudzikawo kuitira kuti zvirinani kuchinjika kune inoshanda nharaunda. Mutumbi wakapamhama, unogona kutakura zvisina kufanira uye zvakapamhamha zvinhu; kubvumidzwa kukuru kubva pasi ndekwekurerutsa kuyambuka zvipingaidzo panzvimbo iyi; iwo mana mavhiri ekutyaira basa ndeyekuona zvakajairika basa munzvimbo ine madhaka, kukwidziridza michina yebasa, uye kuburitsa yakakwira uye hombe Kuputsa simba, otomatiki kuenzanisa kwekuburitsa, kukwirira kwebasa kushanda uye kwakaderera mafuta kudyiwa.
4 vhiri dhiraivha forklift ndicho chishandiso chikuru chekutakura nekuburitsa mashandiro pasi pemamiriro emunda Iyo ine maneuverability akanaka enguva dzose asiri emumugwagwa mota uye kushandiswa kwemaindasitiri kwevakajairika forklifts. Iwo mavhiri ekutyaira anowanzo gamuchira herringbone, yakadzika pateni, uye yakafara base cross-nyika mota. Matayi. Chishandiso chinotakurwa nemusiyano wekuvharira kana wakaganhurirwa-kutsvedza nzira yekuona kuti matai emota yese achatsvedza mumugwagwa wakanyorova. Panyaya yehurongwa, kuitira kuona kuti mota haifambe-fambe pasi pemamiriro ezvinhu emugwagwa, apo ichisangana neyakaganhurwa yekusimudza kugona kwemotokari. Kuona kugadzikana kwekufamba kwemotokari nekuwedzera wheelbase, nekudaro kuve nekuchengetedza kuchengetedzeka kwemutyairi, mota uye nhumbi
4 vhiri dhiraivha forklift inotora ina-vhiri dhiraivha kutapurirana. Kumberi nekumashure mavhiri anotyairwa nesimba. Iyo yekubuditsa torque yeinjini inogona kugoverwa pane ese kumberi nekumashure mavhiri mune zviyero zvakasiyana zvichienderana nemamiriro ezvinhu akasiyana emugwagwa. Iyo yakagadzirirwa anti-skid zvishandiso, injini uye gearbox chimiro dhizaini. Iyo compact uye inogona kushanda mumigwagwa yakaoma senge yemusango, mugomo, uye nemigwagwa ine matope. Mavhiri haazotsvedza nyore kana mamiriro emugwagwa asina kunaka. Iyo yekufambisa simba iri kunyanya hydraulic kutapurirana kana hydrostatic kutapurirana, iyo ine maneuverability yakanaka uye passability.
Pashure: 3.5 TON 4 × 4 Anotendeuka mana Forklift
Zvadaro: iye akakosha masisitimu echimiro uye epamberi tekinoroji kushandiswa muWIK30-25 Backhoe loader